कसरी ‘बढ्यो’ उद्योगमन्त्री मातृका यादवको यति धेरै सम्पत्ति ? – www.agnijwala.com
कसरी ‘बढ्यो’ उद्योगमन्त्री मातृका यादवको यति धेरै सम्पत्ति ?
नेकपाका केन्द्रीय नेता तथा उद्योग, वणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको सम्पत्ति २०६८ सालमा जम्मा दुई कठ्ठा जग्गा मात्रै रहेको खुसाला भएको छ । विगत सात वर्षमा यति धेरै सम्पत्ति यादवले कसरी जोडे भनेर धेरैले प्रश्न उठाएका छन् ।
धनुषा जिल्लाको सवैला २ स्थायी घर भएका यादवका बारेमा दाहालले फेसबुकमा लेख्छन्, ‘०६८ सालमा मात्रिका यादवको अंशबण्डाको छलफलमा संयोगबस म पनि उनको गाउँमा पुगेको थिएँ । उनको कूल सम्पत्ति २ कठ्ठा जग्गा र नगद शून्य थियो । अहिले धनुषामा १० कठ्ठा जग्गा, ललितपुरको चापागाउँमा ३ रोपनी ७ आना जग्गा र १६ तोला सुन फलेछ !’
मन्त्री यादवसँग पत्नी प्रमिलाको नाममा बा १४ च ७३० नं. को निजी गाडी पनि छ । त्यो गाडीको नाम र मूल्य सम्पत्ति विवरणमा खुलाइएको छैन ।